Xaalada deegaanka Somaalida oo kasii daraysa. | ogaden24
Xaalada deegaanka Somaalida oo kasii daraysa.
Mar 13, 2019 - Aragtiyood
Shirkii Godey waxba ma soo kordhin. Oday dhaqameedyadii geed adayga ahaa oo aan u bogin arinta shirka isla markaana isaga baaqday. Waa shaqsiyaad sharaf mudan.
Waxa isa soo taraya dhaqdhaqaa umadeed (mass movement) oo muujinaya in aan inaba lagu qanacsanay maamulka hada ka jira Dawlad Deegaanka Soomaalida. Deegaano badani buugoodaba wey ka saaran dawlada hada jirta lixda bilood.
Dadkii shalay raacsanay oo hada ka qancay ayey bulshadu u badantahay.
Siyaasadu waa qalab umaada loog adeegi karo marka ay gacan xalaal ah ku jirto. Hadayse ku dhacdo meel xun, oo halis ah, dib u dhac iyo tafaraaruq ayey bulshada u horseedi kartaa.
Halaag weli meynaan gaandhin, laakiin xalad cakiran ayaa la galay. Waxa arintaas daliil u ah arimo badan. Qayb kamidi waa kuwan:
1. Dawlada cusub oon inaba u muuqan mid leh kartidi, xirfadi, iyo wayo aragnimo ku filan oo dib u soo noolayn karta nidaam dumay.
2. Dawlada oo ku guul daraysatay ilaalinta, samata bixinta, iyo sugida amaanka bulshadeeda:
Waa Moyaale, Balbbalayti, Baabili, Tuliguuleed, Gursum, Sittii iyi meelo kale oo deeganka ka tirsan. Soomaali aan mari kareyn jidka Harar iyo Jigjiga isku xidha, Oromona ila Bossasso iyo Berbera socon karto waxay ka turjumaysi nidaamka ka dumay Dawlad Deegaanka iyo awood darida Soomaalida.
3.Shaqaale aad u tiro badan oo si nidaamka dawliga ka baxsan shaqooyinkoodii iyo meheradooduu ku waayey, oo weliba qaar labaatan sano wax ku dhow wax u baranayeen.
4. Wax soo saarkii deegaanka oo dumay sida beeraha, iyo xlolo dhaqatada oo cimilo isbadalaysaa (climate change) aad wax u yeeleeyeen. Adeegii deegaanada oo dumay iyo dawladii deegaanka oo lix bilood oo xaflad iyo shaqsiyaad geeska Afrika oo dhan laga macsuimo aan ka dhamaan weli.
5. Hadeerna waxa canantu si dadban uga imanaysaa wasiirada, la taliyaayaasha, iyo oday dhaqmeedyada oo saluugoodu sida maamulka fadhiidki u dhaqmayo. Waxa la sheegayaa in wasiiro badani kaba hoos gurren maamulka.
Intaasoo dhacdooyin ama astaamo ahi waxay tilmaamayaan nidaam dumay ama u dhow in uu dumo.
Wax mala qaban karaa?
Haa, waa hadii la helo dhowr arimodd:
Tubta 1aad. Madaxda hada jirta oo aqoonsata in ay ku guul dareysteen hogaamintii laga rabay, talo wadaag wafdi ahna soo diyaariyaan. Talo wadaagaasi waa in ay danta guud sal u noqotay. Umase eka xukuumad qaadan karta waano noocan ah.
Tubta 2aad. Waan in xisbigu adeegsadaa xeer hoosaadkiisa isla markaana arintan deegaanka ka taagan uu emergency ama “xaalad dagdag” ah ku sifiyaa si loo wajihi karo xal dagdag ahna loogu raadin karo.
Tubta 3aad. Waatan ugu xun laakiin dhici karta hadii xal la keeno wayo. Kacdoon shacab oo midaysan intaan laka guurina waa in uu dhacaa. Tubtani dhibkeeday leedahay mar kale ayaan fiirin doonaa.
Gabogabo: Mawduucan waa in labo arimood laga guntadaa:
1. Xaalka deegaanku (siyaasad, dhaqaale, iyo maamul ahaanba) waa laga dayrinayaa.
2. In la Dhaliilo oo kaliya maaha ee waa in xall lakeenaa.
Waxaan maqaalka ku maamusayaa oday-dhaqameedyada dhinaca sharfta u batay.
Bye: Faysal Roble
Daawo:Xaaf iyo Sh. Shaakirow Hadaad Muslim tihiin dhiiganagu waa idinka xaaraane Nadaaya.
Midka kamida culimada iyo waxgaradka ugu caansan deegaanka Xeraale ee Gobolka Galgaduud ayaa ku ...
Anagu dawlad bur buraysa xil kama Qabanayno” Gudomiyaha TPLF.
Madaxwaynaha mamulka Tigreega ahna Gudomiyaha Ururka TPLF ayaa Gaashaanka kudhuftay in shakhsi kamida TPLF ...
Daawo:Qaabka loo soo dhoweeyay Wafdigii ONLF ee xalay Gobolka Doollo Galay.
Wafdiga sare ee uu Hogaaminayo Gudomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa Fiidnimadii xalay ...
Daawo:Afhayeenka ONLF Digeey Yaa Kule JWXOO iyo dareenka dadwaynaha.
Afhayeenka Jabhada ONLF oo Qayb ka ah Wafdiga Gudomiyaha JWXO ayaa Khudbad siwayn usoo ...
Masuuliyiinta xisbiga ADP-da Axmarada oo Addis ababa lagu Ugaadhsanayo.
Xubno katirsan Hogaanka xisbiga ADP ee Haya Talada mamulka Axmarada kana tirsan Isbahaysiga EPRDF ...